बागलुङ जिल्लाको पश्चिम निसी, भूजी, तमान क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम मत खस्यो ! – ebaglung.com
बागलुङ जिल्लाको पश्चिम निसी, भूजी, तमान क्षेत्रमा अपेक्षाकृत कम मत खस्यो !
२०७४ मंसिर १०, आईतवार १८:५६	Home Slider, Top News, अन्य समाचार, प्रमुख समाचार
छबिलाल पाण्डे, बुर्तिबाङ २०७४ मंसिर १० । बागलुङ जिल्लामा आईतबार सौहार्दपुर्ण रुपमा मतदान कार्य सम्पन्न भएको छ । जिल्लामा करीब ६५ प्रतिशत मत खसेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बागलुङले जनाएको छ ।
कुल १ लाख ६२ हजार २ सय ८३ मतदाता रहेको जिल्लामा स्थानीय तहको तुलनमा १० हजार मतदाता बृद्धि भएपनी मतदानमा भने कम सहभागी भएको बताईएको छ ।
जिल्लाको पश्चिम ढोरपाटन नगरपालिकामा कुल १३ हजार ६ सय ७६ मतदाता मध्य ९हजार ४ सय ५४ मत खसेको छ । जसमा वडा नं १ अन्र्तगत उत्तरगंगा मावि केन्द्रमा १४ सय ६ मतदाता मध्ये क केन्द्रमा ५सय ८८ र ख केन्द्रमा ७ सय ७४ गरी १ हजार ३ सय ६२ मत खसेको हो ।
वडा न ं २ को जनजाृर्ति मतदान स्थलमा दुई केन्द्रमा गरी १८ सय १७ मतदाता मध्ये जम्मा ६५ प्रतिशत मतदान भएको छ । जसमा ६ सय ७३ महिला र ५ सय १५ पुरुष गरी कुल ११ सय ८८ मत खसेको हो वडा नं ३ को पुर्काट क मतदान केन्द्रमा ५ सय ४२ मतदाता मध्ये ३ सय ६७ मत खसेको छ । ख खोसाखानी मतखान केन्द्रमा १ हजार ५५ मतदाता मध्य ६ सय ८२ मत खसेको हो । त्यस्तै ढोरपाटन नगरपालीका वडा नं ४ को खुँगा स्थित छोरेगाउमावि मतदान केन्द्रमा १ हजार २ सय मतदाता मध्य ८ सय ५८ मत खसेको छ । हिमालय निमावि केन्द्रमा ८ सय १९ मतदाता मध्य ५ सय ८३ मत खसेको हो ।
त्यस्त निसिखोला गाउपालिकाको वडा नं १ देबिस्थान मतदान केन्द्रमा २ हजार ९३ मतदाता मध्ये १ हजार २ सय ७४ मत खसेको छ । निसीखोला गाउपालिका वडा नं ३ मा रहेको प्रभा मावि बोहोरागाउ केन्द्रमा १२ सय ५५ मत खसेको छ । निसीखोला गाउपालीका वडा नं ४ को जनमावि झिम्पाको मतदान केन्द्रमा १६ सय १ मतदाता मध्ये जम्मा १ हजार ७ मत खसेको बताईएको छ । निसीखोला वडा नं ६ मतदान केन्द्र क मा ५ सय ८३ मत खसेको छ । निसिखोला वडा नं २ रत्नराज्य मावि केन्द्रमा २ हजार २ सय ६४ मतदाता मध्ये १ हजार ८५ मत खसेको छ । त्यस मतदान केन्द्रमा ४ सय जति मतदाता परिचयपत्र लिन समेत नआएको बताईएको छ ।
त्यस्तै तमानखोला गाउपालिकामा कुल ६ हजार ४ सय ५५ मतदाता मध्ये ४ हजार ३ सय ५३ मत मात्रै खसेको छ । जसमा वडा नं १ बोङगादोभानमा १ हजार ७ सय १७ मतदाता मध्य १ हजार ९७ मत खसेको छ । जसमा महिला ६ सय २७ पुरुष ४ सय ४० , वडा नं २ मा १ हजार ४ सय ६९ मतदाता मध्य ९ सय ९६ मत खसेको छ ।
जसमा महिला ५ सय ५६ ,पुरुष ४४०, वडा नं ३ मा कुल हजार ३५ मतदाता मध्ये ७ सय ६२ मत खसेको छ । जसमा ४ सय २७ महिला ३ सय ३५ पुरुषको मत खसेको छ । वडा नं ४ मा ७ सय ५० मतदाता मध्य ४ सय ७९ मत खसेको छ । जसमा २ सय ७४ महिला २ सय ५ जना पुरुषको मत खसेको हो । वडा नं ५ मा ९ सय ७ मतदाता मध्य ६ सय ५० मतखसेको छ ।
जसमा ३ सय ५५ महिला २ सय ९५ पुरुषले मतदान गरेका हुन् । त्यस्तै वडा नं ६ मा ५ सय ४९ मतदाता मध्य ३ सय ६९ मत खसेको छ । जसमा १ सय ६९ महिला र २ सय पुरुषले मतदान गरेका छन् ।
त्यस्तै वडीगाड गाउपालिका वडा नं ७ भिमगिठे.मा कुल २ हजार ५३ मतदाता मध्य १२ सय ८ मत खसेको छ । जसमा महिला ६ सय ६७ पुरुष ५ सय ४१ जनाले मतदान गरेका हुन् । त्यस्तै वडा नं ६ बुद्ध मावि खाल मतदान केन्द्रमा ६४ प्रतिशत मतदान भएको छ । जसमा १ हजार १ सय ३१ म्तदाता रहेकोमा ७ सय २४ मत खसेको हो । महिला ३ सय ९६ पुरुष ३ सय २८ जनाले मतदान गरेका थिए ।
निसीखोला गाउँ पालिका वडा नम्बर -५ को ज्ञानेन्द्र माध्यमिक बिद्यालय मतदान केन्द्र : तस्वीर- कुमवीर विश्वकर्मा, निसी ।
गल्कोट नगरपालिकामा १३ हजार ८ सय २७ मतदाताले मतदान गरे !
बागलुङ जिल्लाका ४ नगर र ६ गाउपालिकाहरु मध्य कुनमा कति मत खस्यो ? यस्तो छ, मत परिणाम !